PM Ntsay Christian: “Mitaky fitoniana isika” | NewsMada
Mise en accusation devant la HCJ: deux ex-parlementaires parmi les personnes auditionnées
Mihanaka amin’ny faritra 12 ny valanaretina: eto Analamanga ny 114 amin’ireo tranga vaovao Covid-19 miisa 258
Présidentielle de 2023: le FFKM interpelle les politiciens
Fanehoan-kevitry ny minisitry ny Fitsarana : “Tsy voamarina ny nahasamborana an-dRabekoto Raoul”
Mandat d’arrêt international : Flou autour de l’arrestation de Raoul Rabekoto
Tafapetraka ny fangatahana fampodiana: voasambotra tany Bénin Rabekoto Arizaka Raoul
Raoul Rabekoto arrêté au Bénin: l’Etat lance la procédure d’extradition
PM Ntsay Christian: “Mitaky fitoniana isika”
Par Taratra sur 20/12/2018
“Mitaky fitoniana ny Malagasy. Mba tsy misy afa-tsy ny vahoaka malagasy mpifidy no handresy amin’izao fifidianana izao. Izay ihany ny zava-dehibe”, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, teny Androhibe, omaly, taorian’ny latsa-batony, momba ny fisian’ny fanambarana hoe nanindry ny lehiben’ny distrika amin’ny fiatrehana ny fifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa. Efa tapitra ny fampielezan-kevitra ka tomponandraikitra amin’ny fanambarany izay nanao izany.
Mino sy manantena izy fa hijanona ao anatin’ny fitoniana, indrindra hitantana ny zavatra ataon’ny olona, ireo tomponandraikitra amin’ny ankapobeny. Ao ambadik’izany: mandray andraikitra amin’ny trangan-javatra rehetra amin’izay tandrify ny fanjakana ny fitondrana. Rafitra napetraka mba hahaleo tena eo amin’ny fanomanana sy fikarakarana ny fidianana ny Ceni, mandray andraikitra koa.
Ao anatin’ny fangaraharana ny fifidianana
Ao anatin’ny fangaraharana tanteraka no nanaovana ny fifidianana fihodinana faharoa. Manao antso avo hatrany amin’ny vahoaka malagasy izy amin’ny fandraisana andraikitra ao anatin’ny fitoniana. Mba hijery amin’ny sehatra rehetra izay zavatra tokony hokianina, indrindra ny tokony hovaina. Zava-dehibe ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny fahitsiana amin’izao fifidianana fihodinana faharoa izao.
Antenainy fa hilamina hatrany ny vahoaka malagasy ary hisy hatrany ny fandriampahalemana eto amin’ny tanin’ny Repoblika malagasy amin’izay andro lehibe nanaovana ny fifidianana fihodinana faharoa izay.
Kojakoja fanorenana: eny amin’ny mpaninjara ny simenitra amidy 29.000 Ar 01/12/2021
LFI 2022: “Tsy mandrisika mpampiasa vola ny politikan’ny hetra”, hoy ny Gem 01/12/2021
Tahiry be – Orange money sy PAMF: fisarihana olona hanao tahiry amin’ny finday 01/12/2021
«Ballon d’or 2021»: voakiana mafy i Messi 01/12/2021
Kitra – Fitantanana ny FMF: mampisalasala ny taratasin’ny Fifa tsy nisy daty sy sonia 01/12/2021